8Yar (အိပ်ယာ): February 2012
မင်း တခါတခါကျတဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ
Posted by 8Yar at 5:17 pm 16 comments
ဆူးရှတဲ့ ကြယ်တွေ ရှိတယ်တဲ့....
(မှတ်ချက်။ "ဆူးရှ" သည် စူးရှ ခြင်း အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်သောကြောင့် ဆလိမ်ဖြင့် သက်သက် "ဆူး" ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by 8Yar at 8:56 pm 13 comments
ဒီနေ့တော့ Chingay (အပိုင်း၂) ကိုတင်ဖို့ သိပ်အားမရှိတာနဲ့ မနေ့ညက တရားပွဲမှာရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကိုပဲတင်လိုက်ပါတယ်။ အားမရှိဆို ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေက မှုံရီဝေ ဝိုးတဝါး ဖြစ်နေလေတော့ စိတ်လေနေမိတာ မဆန်းပါဘူး။ မနေ့ညက Poh Ern Shih Temple at9Chwee Chian Road, Singapore 117488 မှာ ဆရာတော် ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ ရဲ့ တရားပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ တရားဟောကောင်းသလို လူငယ်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message ကလည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ (19th Feb) Pao Kwan Foh Tang Tampleယ 21 Shun Fu Road, Singapre 575741 မှာထပ်ရှိသေးတာမို့ သွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆရာတော်ကြွမလာမီ ပြင်ဆင်နေကြသော Online radio အဖွဲ့သားများပါ။ မနေ့က ငါးဖွဲ့လာပါတယ်။
တရားပွဲမတိုင်မီ ရောက်ရှိလာကြသော တရားနာပရိတ်သတ်များ။
တရားနာ ပရိတ်သတ် နှင့် ဆရာတော်။
ဆရာတော်၏ ဥပမာပေး ကောင်းခြင်းကြောင့် တရားနာပရိတ်သတ်များ ရယ်ရွှင်။
အပြုံးကိုယ်ဆီဖြင့် တရားပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
တဆက်ထဲပြောပါရစေခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘလော့အစ်မ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အစ်မဝါက မေတ္တာရှင် ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ) ရဲ့ တရားပွဲအောင်မြင်စွာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ အစ်မဝါဆီကသိရတာက volunteer များထပ်မံလိုအပ်နေကြောင်းကိုပါ။ အဲဒါကြောင့် 8Yar အနေနဲ့ မသိသေးသူတွေနဲ့ volunteer လုပ်ချင်သူများအတွက် ဒီသတင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပါတယ်ခင်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ။
တို့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လုပ်အားပေးလိုသူများ အနေနဲ့ အစ်မဝါ ကိုဖြစ်စေ၊ 8Yar (9191 9264) eightyar@gmail.com ကိုဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပေးကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော် နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by 8Yar at 10:11 am4comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အရှေ့ Post မှာပြောခဲ့သလို 8Yar တစ်ယောက် 3rd Feb နဲ့ 4th Feb နှစ်ရက်ဆက်တိုက် Pit Building မှာကျင်းပတဲ့ Chingay ပွဲတော်ကို ပြေးခဲ့ပါတယ်။ 3rd Feb နေ့ဖြစ်တဲ့ ပထမရက်မှာ ရိုက်တဲ့ပုံတွေက shutter speed ကိုမှားချိန်မိလို့ ပုံပေါင်း 699 File လုံးလုံး မဝါးတဲ့ပုံ မရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ 4th Feb မှာတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူ KyawZO လည်းပါ၊ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျော်ကြီးလည်းပါတော့။ ဆရာနှစ်ဆူ အားကိုးနဲ့ အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။
ကဲ.... စမယ် မူးတတ်တဲ့သူပါရင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေး ဆောင်ထား၊ လန့်တတ်တဲ့သူပါရင် စောင်လေးယူထား ပေါ့ဗျာ။ ဟီး....
အချို့လဲ ဒီလို အားပေးကြပါတယ်။ အလယ်က ကလေးကတော့ ခြင်ထောင် အမှတ်ဖြင့်.....
လာပါပြီခင်ဗျာ ပထမဆုံး အဖွဲ့။ ဗိုလ်အောင်ဒင်အလား ထင်မှားလောက်ပေတယ်။
ဆော့စရာရှားလို့ မီးကိုမှ သွားဆော့ရသလား ဦးရယ်။
နဂါးကိုးကောင် မဟုတ်တဲ့ နဂါးသုံးကောင်ကား။
နတ်တွေဆိုတော့ မြေကြီးနဲ့ မထိအောင်လမ်းလျှောက်ကြတယ်။
နဖူးပြောင်တဲ့ ဦးမောင် နတ်များ။
ဒီဟာကတော့ မြင်တဲ့ အတိုင်း တချို့က ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီး ထိန်းတယ်၊ တချို့က နဖူးပေါ်တင်ပြီး ထိန်းတယ်၊ တချို့က ပုခုန်းသုံးပြီး၊ တချို့က ဗိုက်ပေါ်တင်ပြီး လမ်းလျှောက်ပြတယ်။ တစ်ယောက် တစ်လှည့်နဲ့ လဲသွားရင် ဘေးကလူတွေက ဝိုင်းထိန်းပေးကြပါတယ်။ ဟိုတစ်ခေါက် 8Yar လဲ တုန်းက ဘယ်သူမှ ဝိုင်းမထိန်းပေးကြဘူး။ ထိန်းမဲ့သူတွေက ကိုယ့်အရင် မူးပြီးလဲနှင့်နေကြလို့။ သောက်လို့မူးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ 8Yar Dance ပြလိုက်လို့ မူးပြီးလဲသွားတာ။ ဟတ်ဟတ်.....။
တော်ချက်က လန်ထွက်နေတာပဲ 8Yar တို့လို အမြင့်ကြောက်တဲ့လူနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူး။
ခေါင်းရော ကိုယ်ပါ အမွှေးတိုင်တွေ စိုက်ထားသော မီးနဂါး။
လာပါပြီခင်ဗျာ အစိမ်းရောင် နတ်မိမယ်လေးတွေ။
သူကတော့ အလှပြယဉ်ပေါ်က အလှဆုံး နတ်မိမယ်လေးပါ။ လူပျိုသိုး ဘလော့ဂါ ကိုကိုများ အတွက် 8Yar ရဲ့ လက်ဆောင်မွန်ပါခင်ဗျာ။
ဟင့်အင်း ငါတို့က အသားညိုမှကြိုက်တာ ဆိုတဲ့ ကိုကိုသိုးများအတွက် နောက်ထပ်ရွေးစရာ......။
ခြယ်ထားတာတော့ အတော်သေသပ်ပြီး လှသဗျာ။
8Yar ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ ဂျပန်မလေး။ ရယ်ပြသလား... ငိုပြသလား... မသိတော့ပြီ.......။
8Yar ရဲ့ရိုက်ချက်အောက်မှာ ကားကနဲ။ တခါ တခါ ကိုယ့်ရိုက်ချက်တွေကို ကိုယ်ပြန်ကြောက်မိတယ်။ ဟီး.....
ဪ ကိုယ့် အဝတ်အစားနဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေရတယ်လို့ ကွယ်။
ပန်းနီနီ ပေးနဲ့ကွယ် ပန်ချင်ဘူး။
8Yar ကိုကြည့်ချင်တာများ ရိုးရိုးလှည့်ကြည့် လဲရသားနဲ့။
အိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့ညီ အိုဇာတာခင်မာတင် ပါခင်ဗျာ။
တစ်ပင်တိုင်ထီး အက ဆိုတာများလား.....။
စင်ပေါ်က သူကြီးသားဘစီ ရွာထဲဝင်ကာ သောင်းကျန်းနေသည်။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ မျက်ဝန်းပြာလေးကို တင်ပြရင်း Post လေးကို ရပ်နားပါရစေ။ 8Yar ရဲ့ပုံလေးတွေဟာ စာဖတ်သူနဲ့ ဘလော့ မောင်နှမတွေရဲ့ ဘဝ အမောတွေကို ခေတ္တ ပြေပျောက် လျော့ပါး စေတယ် ဆိုရင်ပဲ 8Yar တစ်ယောက် အရမ်းကြည်နူးမိမှာ အမှန်ပါခင်ဗျာ။
(မှတ်ချက်။ ။ ပုံများကို ပြန် share လိုပါက ပြန် share နိုင်ပြီး၊ ကျွန်တော့ ဆိုက်လေးကိုတော့ ပြန်ညွှန်းပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။)
Posted by 8Yar at 11:39 pm 10 comments
သတင်းဗျိုး.... သတင်း....... ဒီနေ့ Feb 3rd ည နဲ့ Feb 4th ညမှာ Chingay ပွဲ ရှိပါတယ်ဗျိုး!!! သွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဟော့ဒီမှာ link ။ နေရာက Pit Building (Next to Singapore Flyer) မှာ အချိန်က 8.30pm မှာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ KZO ကလှမ်းပြောလို့ သိရတာပါ။
Chingay ပွဲဆိုတာ ဘာတုန်းဟ? ဆိုတဲ့ အစ်ကို၊ အစ်မတွေကို ဖြေရရင်... သားလဲ သိဘူး လို့ပြောရမှာပဲ။ :P တကယ်ပြောတာ။ ထင်တာပြောပြမယ်နော်။ Chingay ပွဲက တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါကျင်းပတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံသားတွေအပြင် အခြားနိုင်ငံက အဖွဲ့တွေပါ ဖိတ်ခေါ်ပြီး လုပ်ကြတာပါ။
8Yar ကြိုက်တာက အဝတ်အစား ဆန်းဆန်းကြီးတွေ ဝတ်ထားတာကိုပါ။ ဝတ်တာတော့ အစုံပဲ ကာတွန်းကားထဲက ဇာတ်ကောင် ပုံစံတွေ၊ ဂိမ်းထဲက ပုံစံတွေ ဝတ်တက်ကြတယ်။
ရိုးရာ အဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးတော့လည်း ကတက်ကြတယ်။
ဟီး.... 8Yar သိတာဒီလောက်ပဲ။ Chingay အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ သူတွေပါရင် မျှဝေပေးပါလို့ တောင်ဆိုပါရစေနော်။
ကဲ..... လိုက်ချင်တဲ့သူတွေ ကင်မရာကို အသင့်ပြင် ကိုချီတက်ကြစို့!!!
စာတွေ အများကြီးရေးလိုက်ရလို့ မောသွားပြီ။ အအေးလေးဘာလေးရှိရင် လာတိုက်ဗျာနော်။ ဟီး......
ဘလော့ မောင်နှမတွေကို သတိရလျှက်......
3th Feb 2012
Posted by 8Yar at 5:26 pm9comments